A kooban Update History of iPhoto
1.1 iPhoto Update Taariikhda
2.2 iPhone in iPhoto
2.3 iPhoto Muqaal
2.7 iPhoto in DVD
3 Talo iPhoto
3.1 Best iPhoto Talooyin Tricks
3.2 iPhoto saar tus
3.3 Wareegga iPhoto Library
3.5 iPhoto kaabta
3.6 iPhoto in iPad
3.7 iPhoto si iPhone
4.2 iPhoto lagu bedelan karo
5.2 Manager iPhoto Library
5.3 iPhoto in Facebook
5.4 iPhoto in Picasa
6 Dhibaatooyinka iPhoto
6.1 Dhibaatooyinka iPhoto
Sanadkii 2002, ayaa gaaray iPhoto sidii xal khalkhalgelinta sawir digital ka Apple u Mac kombiyuutarada shakhsi. Users Apple, oo ahaa ku soo fiirin maqnaan lagu kalsoonaan karo iyo software ah maamulka sawir fiican oo warbaahinta dhijitaalka ah, ugu danbeyn helay helitaanka ah ee guriga maamulka sawir iyo codsiga tafatirka ay u isticmaali karaan si ay u dajiyaan, badbaadiyo, loo abaabulo, edit, share iyo daabacdo sawirada digital. Ilaa hadda sida ay functionalities ee iPhoto waa uu ka walaacsan, waxaa inta badan marka la barbar dhigo kooxaha Picasa ka Google, Photo Gallery ka Microsoft, album Adobe Photoshop iyo Media Mid ka Phase One. Muddo sanado ah, software khalkhalgelinta sawirka helay dhowr updates la taaban karo, oo uu maray isbedel badan (daqiiqadii oo waaweyn oo labadaba) si joogto ah tafatirka image iyo shuruudaha marin-habaabinayaan kulmaan. Asal ahaan iyo si gaar ah u sii daayay OS X Mac, software ka soo gaaray sida codsiga lacag la'aan ah website Apple ayaa marka ay soo saari sannaddii 2002.
Fadlan Dooro A Year
Year of sii daayo , 2002
Operating System : Mac OS X 10.1
Details : The hore iyo version ugu aasaasiga ah ee codsiga loo ogol yahay dadka isticmaala si ay u isticmaalaan qalabka loo abaabulo oo sawir digital wadaagaan via email, qabsato heerar duwan iyo iftiin ee image ka, macluumaad camera iyo image u sawir kasta hayn, sawirada dejinta ka CD-yada, la abuuro album sawir by jiidayeen images maktabada Photo oo dheeraad ah. Ka sokow, dadka isticmaala loo ogolaaday in ay xitaa ku amri daabacayaa xirfadeed ee sanamyadooda la door bidayo ka Kodak, ama ku amri buug hardcover ka mid ah muuqaalada ku iPhoto. A hore-gen sawir xal khalkhalgelinta lagu kalsoon yahay dhab.
Year of sii daayo , 2003
Details : Iyadoo version of this software tafatirka sawirka, dadka isticmaala goob joog isdhexgalka ee arjiga la iLife - Suite codsiyada ka buuxay warbaahinta ka Apple. Sii daayay ee San Fransisco ee Expo Macworld ah, Suite iLife lagu sii daayay oo ka mid ahaa oo dhan oo versions of Mac ka hawlgala nidaamka markaas ka. Suite waxaa ka mid ahaa codsiyada sida iMovie, iDVD, Lugood iyo iPhoto. The software tafatirka sawir la sii daayay sida qalab standalone sidoo. Version of qalab loo ogol yahay dadka isticmaala si ay u wadaagaan images digital, la abuuro duubey la music asalka la iDVD ah, muuqan photos archive, la timaado siyaabo hal abuur leh ee soo bandhiga images ay ku daray qoraalka iyo sidoo kale asxaabta iyo qoyska iyaga wadaagaan.
Year of sii daayo , 2004
Operating System : Mac OS X 10.2.6
Details : Tani version of iPhoto loo ogol yahay dadka isticmaala si ay dantooda sawirada liaison qalab kale iLife. Users haatan ka mid noqon kara qaab aan muuqan iyo ka badan oo kuwan raadkaygay audio abuuray isticmaalaya GarageBand, si fiican daro kala guurka filimada iyo qabow iyo saamaynta video, abaabulo photos, share sawiro.
Year of sii daayo , sii daayay sannadaha iman kara laga bilaabo 2005 ilaa 2009
Operating System : Mac OS X 10.3.4 (iPhoto 5), OS X 10.4.3 (iPhoto 6), OS X 10.4.9 (iPhoto 7), OS X 10.5.6 (iPhoto 8)
Details : Intii u dhaxaysay 2005 iyo 2009, casriga ah ku salaysan Cupertino qoraalkii iman kara Rafaa ee iPhoto, iyadoo mid kasta uu helo casriyaynta eego functionalities iyo user interface. Software Mid kasta oo soo bandhigay muuqaalada kala duwan oo gaar ah oo horumar ka horreeyay, oo ka samatabbixiyey ku qanacsan fiican iyo geynta in dadka isticmaala.
Year of sii daayo , 2010
Operating System : Mac OS X 10.6.3
Details : The app iPhoto ahaa, 2010, la sii daayay iyada oo qayb ka mid ah dhammaan cusub iLife '11 Suite ee xaflad sanadle Apple. Codsiga waxaa loo qeexay sawir tafatirka oggol yahay isticmaala inay email images isticmaalaya mawduucyada iyo muujisay is-dhexgalka fiican leh warbaahinta bulshada sida Facebook, ama ku darto images in slideshow ka soo baxay oo 12 marto. Available sida codsi standalone sidoo, qalab ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalada sida hababka shaashad buuxda in ay yihiin dabaqi karo dhacdooyinka, meelaha iyo wejiyo. Dheeraad ah, waxaa la siiyaa habab kala duwan si ay u abuuraan photobooks iyo kaararka sidoo.
Year of sii daayo , 2013
Operating System : Mac OS X 10.9
Details : sii daayay sannaddii 2013, iPhoto ah 9.5 waa mid ka mid ah qoraalkii ugu casri ah qalab tafatirka sawirka. The dhan codsi cusub oo loogu talagalay dadka isticmaala Mac taageertaa daawashada shaashad buuxda iyo tafatirka, oo soo bandhigtay is-dhexgalka fiican la websites warbaahinta bulshada sida Facebook iyo Twitter, waxay bixisaa wax soo saarka fiican iyo fursado sida email, print iyo in ka badan. Ka sokow, qalab kale oo ay taageertaa histogaraam tafatirka in ay sii hufay sanamyadii, iyo image files cayriin shaqeeyaa sidoo kale si wanaagsan. Marka taa laga reebo, codsiga sidoo kale dhowr daahsoon ka horreeyay ay la eego interface user, functionalities iyo kooxaha ka.
IPhoto waxay u badan tahay waa mid ka mid ah abaabulka ugu fiican sawir iyo codsi ay marin-habaabinayaan u Macintosh ka hawlgala nidaamyada. Sida ay sii wadaan in ay umuuruhu, codsiga la hubaa inuu samatabbixin awoodaha tafatirka sawir si mug leh oo noqon ku par qalab loogu dhufto ee kale.
EasyWMA u Mac
> Resource > Mac > Taariikh kooban oo ku iPhoto